पुस्तकालय नयाँ बिषय अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरुको लागि उपयोगी ठाउँ हो – Bhaktapur Khabar
By Bhaktapur Khabar	 On २०७८ भाद्र १५, मंगलवार १७:१९
आज राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस । भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा पुस्तकालय दिवस मनाउँदैछौं ।
आधुनिकतासगै युवा पुस्तामा पठन संस्कृतिको विकास गर्ने यस कार्यक्रमको उद्देश्य हो । विज्ञान र प्रविधिको विकासले संसारलाई सानो मात्रै होइन मानिसलाई अत्यन्त व्यस्त पनि बनाएको छ । संसारमा भइरहेका नयाँ नयाँ विकास र समृद्धिको बिषय आज छोटो समयमा कम्प्युटर वा मोबाइलको सहयोगमा अध्ययन गर्न सक्ने भएका छौं । समाज आजको अबस्थासम्म आइपुग्न हजारौं र लाखौं वर्षको इतिहास छ । त्यसबारे अध्ययन अनुसन्धान प्राचीन र आधुनिक पुस्तकालयहरुको सहयोग विना सम्भव हुँदैन ।
एउटा अक्षर, शब्द, वाक्य र भाषा निर्माणको लागि समाज विकासको क्रममा हजारौं वर्ष लागेको हुनुपर्छ । प्राचीन चीन, ग्रीस, रोम, भारतलगायतका देशहरुमा लेख्ने कलाको विकास भएको र त्यसबेला जनावरको हाड, बाँसको बोक्रा, काठको चोया आदिमा लेख्न सुरु भएको तथा लेख्ने कलासँगै संसारमा ज्ञान सामाग्रीहरुको विकास भएको इतिहास पाइन्छ ।
लेख्ने, कोर्ने कलाको विकाससँगै त्यसलाई संकलन गरी सुरक्षित कामको पनि सुरुवात भयो । त्यो संग्रह गर्ने ठाउँलाई नै पुस्तकालय भनियो र संसारमा सयौं वर्ष पहिले नै यस्तो प्राचीन पुस्तकालयको विकास भएको थियो । सन् १४४० मा जर्मनीमा प्रेसको विकास भएपछि माटो, हाड, बाँसको बोक्रामा सीमित ज्ञान सामाग्रीहरु कागजमा मात्रै सीमित भएन त्यसले विकासमा तीव्रता पायो ।
अठारौं शताब्दीमा विश्वमा अध्ययन अध्यापनको लहरसँगै संसारमा विश्वविद्यालय स्थापनाको क्रम शुरु भयो । अध्ययन अनुसन्धानको सुरुवात त्यहींबाट भएको मानिन्छ ।
अहिले संसारमा लाखौं पुस्तकालय सञ्चालनमा छन् । दैनिक लाखौं पुस्तक र पत्रपत्रिकाहरु प्रकाशित भइरहेका छन् । प्राचीन पुस्तक र पत्रपत्रिकाहरु संरक्षणको अभावमा कैयौं लोप भइसके होलान् भने कैयौं संग्रह गरी संरक्षण गरेका थुप्रै पुस्तकालयहरु पनि छन् । पुस्तकालय नयाँ नयाँ बिषय अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरुको लागि अत्यन्त उपयोगी ठाउँ हो । हाम्रा प्राचीन पुस्तक र पत्रपत्रिकाहरु पनि पुस्तकालयहरुमा सुरक्षित गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो भूगोल, इतिहास र मानव विकास सम्बन्धी प्राचीन पुस्तकहरु पनि देश विदेशका विभिन्न पुस्तकालयहरुमा पाउन सकिन्छ ।
दरबारमा बस्ने राजा महाराजाहरु र कयौं धनी व्यक्तिहरु तथा बुद्धिजीवीहरु आफ्नै घरमा निजी पुस्तकालय बनाएर अध्ययन गर्ने गर्छन् तर त्यो सर्बसाधारण र काम गरी खाने वर्गको निम्ति सम्भवको बिषय होइन । अध्ययन गर्ने र ज्ञान हासिल गर्ने अवसर सबैले पाउनु पर्छ । अध्ययनको पहुँच सर्ब साधारण जनतासम्म पु¥याउनको निम्ति नै ठाउँ ठाउँमा सार्वजनिक पुस्तकालयहरुको आवश्यकता पर्दछ । अहिले टोल टोलका सार्वजनिक पुस्तकालयसँगै विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरुमा पुस्तकालयहरुको विकास भइरहेको छ । कतिपय सार्वजनिक पुस्तकालयहरु नाम मात्रकै छन् । त्यसको उचित प्रयोग हुन सकिरहेको छैन भने आवश्यकताअनुसार पुस्तक पत्रपत्रिकाहरु पनि राख्न सकिरहेका छैनन् । विद्यालय र कलेजमा पुस्तकालय भएन भने त्यहाँका शैक्षिक स्तर पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । जसरी शैक्षिक संस्थाहरुमा प्राध्यापक, विद्यार्थी र प्रयोगशालाहरुको आवश्यकता रहन्छ त्यसरी नै पुस्तकालयको पनि आवश्यकता हुने गर्दछ । अहिले विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै आधुनिक र प्रविधियुक्त पुस्तकालयको महत्व झन् बढ्दै गएको छ ।
ज्ञानगुण हासिल गर्ने सबैभन्दा सजिलो माध्यम पुस्तक र पत्रपत्रिकाहरु नै हुन् । जति बढी जनताको बीचमा पुर्याउन सकिन्छ, त्यति नै जनता सचेत हुनेछन् । यसको लागि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालभाषामा पुस्तकालयलाई साफुकुथि भनिन्छ । भक्तपुरमै पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गर्नुअघि नै व्यवस्थित पुस्तकालय भएको इतिहास छ । भक्तपुरका अन्तिम राजा रणजित मल्लले हालको साकोठामा पुस्तकालयको स्थापना गरेको, त्यहाँ नालन्दा विश्वविद्यालय, विक्रमशील विश्वविद्यालय र सिम्रनगौढ राज्यबाट ल्याइएका बहुमूल्य हिन्दु एवम् बौद्ध धर्म तथा ज्ञानविज्ञानसँग सम्बन्धित ग्रन्थहरु ल्याइ संग्रहित गरिराखेको उल्लेख छ । पृथ्वीनारायण शाहले बि.सं. १८२६ मा भक्तपुरमा आक्रमण गरी सयौं घरहरु जलाउनुका साथै हजारौं जनताको ज्यान लिएसँगै रणजित मल्लद्वारा निर्मित उक्त पुस्तकालय जलाएको इतिहासविद् विश्वमोहन जोशीले ‘ख्वपको राजनैतिक अवस्थाको ऐतिहासिक परिचय’ शीर्षक लेखमा उल्लेख गर्नुभएको छ । जे होस् भक्तपुरमा आजभन्दा २५० वर्षअघि नै राम्रो र व्यवस्थित पुस्तकालय रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
अहिले भक्तपुरमा सार्वजनिक ३१ वटा र कलेज र विद्यालयहरुमा पनि छुटाछुटै पुस्तकालयहरु सञ्चालनमा छन् । ती अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालयहरु व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको जनगुनासो छ । त्यसबारे भक्तपुर नगरपालिकाको ध्यान गएको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले जनज्योति पुस्तकालय सञ्चालन गर्दै आएको सर्वविदित्तै छ । अशिक्षित जनतामा ज्ञानको ज्योति दिने, अध्ययन, अनुसन्धानलाई अग्रसर बनाउने, दुर्लभ वा लोप प्रायः भएका पुस्तक तथा शैक्षिक साधनहरुलाई एकत्रित र सुरक्षा गरी सदुपयोग गर्नेलगायतको उद्देश्य लिएर २००७ सालमा स्थापना भएको उक्त पुस्तकालयलाई थप व्यवस्थित र समायानुकूल सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीहरुको लागि उपयोगी बनाउने उद्देश्यले त्यसलाई थप सुधार र विस्तार गर्ने योजना बनाउँदैछौं ।
अहिले वडा वडामा सञ्चालित सार्वजनिक पुस्तकालय र विद्यालय कलेजहरुमा सञ्चालित पुस्तकालयसँग जनज्योति पुस्तकालयमार्फत सम्पर्क बढाउने र सक्दो सहयोग गरी सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने नीति नगरपालिकाको रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
इन्टरनेटको समय भएकोले पहिलेजस्तै पुस्तकालयमा गइ हरेक बिषयमा अध्ययनको पनि जरुरत नपर्ला । त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर इ. लाइब्रेरीको विकास, उच्च शिक्षाको लागि अध्ययन गर्न छुट्टै व्यवस्थित अध्ययन कक्षको व्यवस्था र उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी र बुद्धिजिबीहरुको सुझावअनुसार थप पुस्तकहरु राख्ने हामीले तयारी गरिरहेका छौं । हाल दिइरहेको सेवा अपुग भएको जनगुनासो पछि त्यसको स्तरवृद्धिको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं ।
सबै साथीहरुसँग छलफल गरी बुद्धिजिबी साथीहरु र पुस्तकालयमा कार्यरत यहाँहरुको उचित सल्लाह र सुझावहरुलाई ध्यान दिएर पुस्तकालय विकासको निम्ति हामी निरन्तर लागिरहनेछौं । यहाँहरुको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं । धन्यवाद ।
(राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसको अवसरमा भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा २०७८ भदौ १५ गते भएको विचार गोष्ठीमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिद्वारा व्यक्त मन्तव्य)